विप्लवको अन्तर्वार्ता : ठग, तस्कर र भ्रष्टहरूलाई ठोकेर जनताको सम्पत्ति जनतालाई नै दिनुपर्छ::देश र जनताप्रति समर्पित
विप्लवको अन्तर्वार्ता : ठग, तस्कर र भ्रष्टहरूलाई ठोकेर जनताको सम्पत्ति जनतालाई नै दिनुपर्छ
नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव हुन्। सरकारले गत फागुन २८ गते उनको पार्टीलाई प्रतिबन्ध मात्रै लगाएको छैन, उनको पार्टीलाई प्रत्यक्ष/परोक्ष साथ र सहयोग गर्नेहरूलाई पनि कारबाही गर्ने बताउँदै आएको छ। कुनै समय उनीसँगै एउटै मोर्चामा रहेका नेताहरू अहिले सरकारमा छन्। तर तिनै नेताहरू विप्लवले आफूहरूलाई मार्न पार्टी बैठकबाटै निर्णय गराएर मान्छे खटाएको बताउँदै छन्। यस्तो बेला उनको पार्टीको योजना, सरकारसँगको वार्ताको सम्भावनालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर अन्नपूर्णका लागि रामकृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानी :
सरकारले तपाईंहरूमाथि प्रतिबन्ध लगायो। यो प्रतिबन्धप्रति तपाईंको पार्टीको धारणा के हो ?
हो, हामीमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। देशको अर्बौं रुपैयाँ ठग्ने एनसेलमाथि कारबाही गरेपछि यो घोषित प्रतिबन्ध लगाइयो। तर यो बहाना मात्र हो। सारमा प्रतिबन्ध भनेको वर्ग स्वार्थ र वर्ग हितसँग जोडिएको विषय हो। प्रतिबन्धले वर्ग विचार र हितको प्रतिनिधित्व गर्छ। हाम्रो पार्टीले करछली, मानव तस्करी, भ्रष्टाचार, मजदुर निकाला गर्नेहरूलाई कारबाही गर्दा केपी सरकारले हामीमाथि किन प्रतिबन्ध लगाउने ? कम्युनिस्टको सरकार भए त खुसी पो हुनुपथ्र्यो त। तर केपी–प्रचण्डहरू खुसी भएनन्, आक्रोशित भए। तर जनता त खुसी भए नि। यसले सावित गर्‍योयो– केपी–प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार श्रमिक जनता, देशभक्त र लोकतन्त्रवादीको होइन, यो दलाल, कमिसनखोर, ठग, तस्कर, भ्रष्टाचारीहरूको सरकार रहेछ।
यो प्रतिबन्ध एक्काईसौं शदीको विचार– राजनीतिक स्वतन्त्रता, नागरिकहरूले पार्टी सञ्चालन गर्न पाउने, जनता र देशको सेवा गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारविरुद्ध छ। साथै, गलतका विरुद्ध विरोध र विद्रोह गर्न पाउने जनताको अधिकारका विरुद्ध छ। यो पुँजीवादी प्रजातन्त्रको कुरा गर्नेका लागि पनि लज्जास्पद कदम हो। यसले राज्यको अराजकतावादी चरित्र मात्र होइन, फाँसीवादी अनुहार पनि उदंग्याउँदै छ।
अर्को कुरा, केपी सरकार आफ्नै पार्टीका नेताले प्रतिवाद गर्ने स्तरमा असफल भयो। यसले चौतर्फी असफलता र संकटको सामना गरिरहनु परेको छ। राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, तस्करी, विभिन्न काण्डहरूमा डुब्न पुगेको छ। यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनताका बीचमा लोकप्रिय र प्रभावी बन्दै गएको छ। हजारौंहजार नेता–कार्यकर्ता र जनता हाम्रो पार्टीवरिपरि गोलबन्द बन्दै गए। सत्ता संघर्षमा दलाल पुँजीवादी सत्ताको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापित बन्दै गएको छ। यी सारा घटनाबाट जनताको ध्यान मोड्न प्रतिबन्धको हावा खडा गरिएको छ। यो प्रतिबन्ध वास्तवमा केपी सरकारको असफलता र संकटको अभिव्यक्ति मात्र हो। त्यही भएर हो यो प्रतिबन्धलाई सारा राजनीतिक पार्टी, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, कानुनविद्, मानवधिकारवादी र विभिन्न संघसस्थाले खुलेर विरोध गरेका छन्। केपी सरकार एक्लिएको छ। हाम्रो माग छ– केपी सरकारले यो प्रतिबन्ध फिर्ता लिनुपर्छ।
– सोमजी र अन्य साथीहरूसँग हाम्रा कमरेडहरूको भेटघाट र अनौपचारिक कुराकानी नभएको होइन तर सरकारले आधिकारिक पहल त गरेन नि।
वार्ताका लागि तपाइंहरूलाई सरकारका तर्फबाट केही सर्तसहितको प्रस्ताव पनि गएको थियो भनिन्छ, सरकारको तर्फबाट के प्रस्ताव आएको थियो ?
अहिले पनि सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग, अझ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपाका नेताहरूसँग तपाईं र तपाइंका पार्टीका कतिपय नेताका औपचारिक÷अनौपचारिक छलफल भइरहेकै छ भनिन्छ, वास्तविकता के हो ?
आफ्नो प्राण भर्न पनि विदेशी गल्ली चाहर्दै हिँड्ने दुई कौडीका कायरहरूले गर्ने प्रचार हो यो। यसलाई पागलहरूले पनि विश्वास गर्दैनन्। वैज्ञानिक समाजवाद—साम्यवादको विचार नै श्रमिक वर्गीय विश्वलाई प्रज्ज्वलित र परिचालित गर्ने जादुको हतियार हो।
विभिन्न ठाउँमा भएका हिंसाका घटना चन्दाकै लागि भएको भनिन्छ, एनसेलमाथिको आक्रमण पनि त्यही प्रयोजनका लागि थियो भनिन्छ ?
महाकाली, कर्णाली, अरूण बेचेर खाने, त्यसले पनि नपुगी कमसिनखोर, ठग, सुदखोर, तस्कर, डनहरूलाई पालेर बसेका र उनैको स्वार्थमा टुप्पी डुबाउँदै हिँड्ने पाखण्डीहरूले मच्चाएको चीत्कार हो। जहाँसम्म चन्दाको कुरा छ, क्रान्तिले एउटा दिन ल्याउनेछ स्वयं यी भन्नेहरूले पनि खुसीसाथ दिनेछन्। हाम्रै क्रान्तिको बलमा यिनको जीवन पनि बाँच्नेछ।
हो त तपाईंले भनेका कुरा हामीले भनेका छौं। श्रमिक जनताको धागो पनि लिनु हुँदैन र हामीले लिएका पनि छैनौं। हामीले त जनतालाई उल्टो दिने हो र दिई पनि रहेका छौं। सुकुमवासीलाई गाँस, वास, मजदुरलाई कामअनुसारको दाम, महिलालाई पुरुषसमान सम्पत्ति, युवालाई रोजगार, विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा, जनताका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य दिने भनेर त लडिरहेका छौं। यो त जनताले पनि बुझेका छन्।
अनि जनताले हाम्रो नेतृत्वमा आफ्नो मुक्तिका लागि ज्यान पनि दिँदै आएका छन्। मैले भनेको त जनताले मुठी उठाएर दिन्छन्, उद्योगीले सहयोग गर्छन्, ठग, तस्कर र भ्रष्टहरूलाई ठोकेर लिनुपर्छ या उनीहरूले जनतबाट लुटेको सम्पत्ति कब्जा गरेर जनतालाई नै दिनुपर्छ। क्रान्ति भनेकै त यही हो। यही त कम्युनिस्ट पार्टीको नैसर्गिक अधिकार हो।
साम्यवादको सपना देख्नेले आफ्नै जीवन पारदर्शी गर्न नसक्ने, आवश्यकता अनुसारको दाम भन्नेले पार्टीको पैसा कुम्लो पारेर विदेशी बैंकमा लुकाउने, देशै बेचेर कमिसन खाने र उल्टो चर्का कुरा गर्ने, सरकारी जग्गा निल्न बाँकी नराख्ने हुनु नै यसको समस्या हो। हामी कम्युनिस्ट अर्थदृष्टिकोण, कम्युनिस्ट जीवन, अर्थउत्पादन र वितरणबारे कैयन् महत्वपूर्ण निष्कर्षमा पुग्दै छौं। हामी माक्र्सले अनुसन्धान गरेको साम्यवादी अर्थजीवन दिनुपर्छ भन्नेमा लागिपरेका छौं, जो पुँजीवादभित्रको कथित निजी जीवनभन्दा सयौं गुणा श्रेष्ठ र सभ्य हुन्छ। विश्वास छ– हामी साम्यवाद दिन सक्ने छौं।
–तपाईंले भन्नुभएको सही हो– जनताले द्वन्द्व थेग्न सक्दैनन्। त्यसैले त हामीले ६५—६६ सालदेखि नै भन्दै आएका छौं– पुँजीवादी, दलाल पुँजीवादी, संशोधनवादी, अवसरवादी, विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले जनतालाई जनयुद्धका उपलब्धिबाट पछाडि फकाएर जानाजान द्वन्द्व भड्काउँदै छन्।
जनताले माओवादीलाई साथ दिएपछि दलाल पुँजीवादी सत्ता लाद्न द्वन्द्वतिर लगिँदै छ। जबर्जस्त दलाल पुँजीवाद लाद्नु भनेको द्वन्द्वमा देशलाई ठेल्नु त हो। आखिर भयो त्यस्तै। अब जनताले विशेषतः शोषितपीडित श्रमिक जनताले बुझेका छन्– द्वन्द्वको समाधान क्रान्तिभन्दा अर्को तरिकाले सम्भव छैन। जनताले द्वन्द्व होइन, क्रान्ति गर्नेछन्। हामी क्रान्ति गर्ने छौं। क्रान्ति थेग्ने कुरा होइन जनता स्वयंले गर्ने कुरा हो।
– हेर्नुस्, हामीले एकीकृत जनक्रान्तिको कुरा केवल पार्टीको हितका लागि गरेका छैनौं। आज दलाल पुँजीवादी सत्ताको कारणले कम्युनिस्ट, वामपन्थी, देशभक्त, लोकतन्त्रवादी सबै आक्रान्त छौं। कुनै एक शक्ति एक्लै लडेर यसको पार लाग्दैन। हामी सबै मिलेर देशमा आजसम्म प्राप्त हुन नसकेको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने दिशामा गयौं भने सबै जनताको उद्देश्य पूरा हुनेछ। कम्तीमा हाम्रै खुट्टामा उभिएर आफ्नै देशबारेमा सोच्न सक्ने छौं।
हामीले यो अंतरवार्ता अन्नपूर्णपोष्ट दैनिक बाट साभार गरेका हौ
नेकपाका रामेछाप इञ्चार्ज यादव ढुङ्गेल पक्राउ
विप्लवकाे देशब्यापी कालाे झण्डा प्रदर्शन कहाँ कसरी भयाे हेर्नुस्
कारागार भित्रै कार्यक्रम ‘सुदर्शन’को सम्बोधन ‘जेल साँघुरो घेरा होइन, समग्र विश्व हो’
विप्लव सिन्धुलीमा, प्रकाण्ड दाङमा भएको सुरक्षा निकायको रिपोर्ट , प्रतिबन्ध पछि ८४ जना गिरफ्तार
रोकिएनन कसैका ‘आँसु’ प्रज्वल शाहिको शव यात्रामा….. (भिडियो सहित)
नेत्र बिक्रम चन्द विप्लव
परिस्थिति आए सभापति नै ल’ड्न सक्छु’ : गगन थापा कांग्रेस महामन्त्रीमा युवा नेताद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले दाबी गरेका छन्। महाधिवेशन आउन डेढ -दुई वर्ष बाँकी छँदै कांग्रेसमा नेतृत्वको जोडघटाउ सुरु भएको ...